Ny HiSET Test - High Examen Equivalence Exam
Ho an'ny Mpianatry ny olon-dehibe Basics
Momba ny fanadinadinana hiray amin'ny HiSET High School Equivalency
Inona ny ao amin'ny test HiSET vaovao?
Ny 1 janoary 2016, ny Fivorian'ny GED (General Development Development), izay natolotry ny GED Testing Service, dia niova ny fotoana lehibe, ary toy izany koa ny safidy azon'ireo fanjakana any Etazonia, izay samy mametraka ny fepetra manokana. Manana safidy telo ny governemanta ankehitriny:
GED Testing Service (mpiara-miasa amin'ny lasa)
HiSET Programa, novolavolain'ny ETS (Trial Educational Testing Service)
Famaranana fanadinana faharoa (TASC, novolavolain'ny McGraw Hill)
Ity lahatsoratra ity dia mikasika ny test vaovao hiasa ao amin'ny:
Raha tsy voatanisa eto ny firenena misy anao, dia manolotra fitsapana hafa amin'ny fitsaboana hafa izy. Fantaro hoe iza amin'ireto lisitra ireto: GED / High School Equivalency Programa any Etazonia
Inona no ao amin'ny Test HiSET?
Ny tetikasa HiSET dia manana ampahany dimy, ary nalaina tamin'ny solosaina:
Fiteny - Famakiana (65 minitra)
40 fanontaniana misafidy samihafa izay mitaky anao hamaky sy handika ireo lahatsoratra literatiora avy amin'ny karazana isan-karazany, anisan'izany ny memoirs, ny essays, ny biography, ny editorials, ary ny poezia.
Fiteny - Manoratra (75 minitra ny Fizarana 1; 45 minitra ny Fizarana 2)
Ny fizarana 1 dia manana fanontaniana 50 misafidy marobe izay mandinika ny fahaizanao manitsy litera, andrana, lahatsoratra an-gazety, ary lahatsoratra hafa ho an'ny fikambanana, rafi-pitsarana, fampiasana ary ny mekanika.
Ny fizarana 2 dia midika hoe manoratra lahatsoratra iray. Hiantehitra amin'ny fandrosoana, ny fandaminana ary ny fiteny ianao.
Matematika (90 minitra)
50 fanontaniana maro samihafa izay manandrana ny fahaizanao misaina ary ny fahatakarana ny asan'ny tarehimarika, ny fandrefesana, ny fanombanana, ny fandikana ny data, ary ny fomba fisainana lojika. Azonao ampiasaina ny calculator.
Science (80 minitra)
50 fanontaniana misafidy maromaro izay mitaky anao hampihatra ny fahalalanao momba ny fika, ny simia, ny zavamaniry, ny zavaboahary, ny fahasalamana ary ny astronomie. Ny fandikana ireo grafika, latabatra, ary tabilao dia tafiditra amin'izany.
Fianarana sosialy (70 minitra)
50 fanontaniana maro samihafa momba ny tantara, siansa politika, psikolojia, sosialy, anthropologie, jeografia, ary toekarena. Ilaina ny manavaka ny marina amin'ny hevitra, mandinika ny fomba fiasa, ary mitsara ny fahamendrehan'ny loharano.
Ny vidin'ny fitsapana, amin'ny 1 Janoary 2014, dia $ 50 amin'ny ampahany tsirairay izay mandoa $ 15 isaky ny tsirairay. Ny sandan'ny $ 50 dia ahitana ny fanomanana fitsapana maimaim-poana sy ny famerenana roa malalaka ao anatin'ny 12 volana. Ny fandoavam-bola dia mety ho hafa amin'ny fanjakana tsirairay.
Ny tranonkala HiSET dia manome lahatsary maimaim-poana, mpanara-maso ny fianarana amin'ny endrika PDF, fametrahana fanontaniana, ary fitsapana. Azonao atao ny mividy fitaovana fanampiny amin'ny tranokala.
Ny vohikala HiSET koa dia manome torohevitra sy paikady mahasoa ho an'ny fitsapana ny fitsapana, anisan'izany ny fomba hahafantaranao raha efa vonona ianao, ahoana ny fandaminana ny fotoanao, ahoana no hamaliana ireo fanontaniana maro samihafa, ary ny fomba hanatonana ny fanontaniana amin'ny fanontaniana momba ny fanoratana ampahany amin'ny fitsapana amin'ny teny anglisy.
Ny fitsapana roa hafa
Ho fampahalalana momba ireo fitsapana mitovy amin'ny lisea roa hafa, jereo:
Ny test GED
Ny famaranana fanadinana faharoa (TASC) - ho avy tsy ho ela!
Ny fiatrehana ny lava-bato tsy omby tratra ao amin'ny diadema maoderina
Ny fototry ny fianarana ambony
Fanabeazana malaza avy amin'ny filozofa Herbert Spencer
Ny anjara asan'ny aretin-koditra amin'ny literatiora
Ny diaben'ny mahery - ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenany amin'ny Elixir
Fa manao ahoana ny halehibiazanao?
Inona no mpianatra tsy mifanohitra?
Ny Journey Hero - fihaonana amin'ny Mentor
Ny Dia Ny Zava-mitranga - Mitety ny Tafika - Tests, Allies, Fahavalo
Inona ny Vestalia?
Hetsim-pandrosoana an-jatony ao Shina
'Oliver Button dia Sissy' avy amin'i Tomie dePaola
Fanambadiana efatra avy amin'i Philippe II, mpanjakan'i Espaina
Lazao Brak - Renivohitr'i Mezopotamia any Siria
Manolora trondro tropikaly - Ahoana no hanalana trondro tropikaly iray
SAT Scores amin'ny fidirana ho any amin'ny oniversite ambony
Speed ​​Skating Water: Kilometatra Kilaometatra isan'ora no tsara indrindra?
Corrido: Ny Tantaram-piainana Meksikana ao amin'ny Hira
Fahatakarana ny System Bretton Woods
Ahoana no hamoronana vondron'orinasa sy endrika miavaka amin'ny maha Mpanakanto azy?
Fanavaozana momba ny fandripahana ala
Inona avy ireo fepetra manan-danja amin'ny fitarafana ara-bola?
Oak oak, hazo Common in Amerika Avaratra
Tontolo iainana mahomby sy safidy sekoly
Inona no atao hoe Pronoun generic?
Mpandresy tompon-daka amin'ny British Amateur
Lisitry ny hira momba ny maha-ray aman-dreny
Rucker Park - Kianjan'ny Yankee amin'ny Streetball